China Cold Yakagadzirwa Simbi Angle Bar Yekuchengetera Rack fekitori nevagadziri |Zhanzhi
Cold yakaumbwa simbi angle bar inogadzirwa nekutonhora kuumba simbi ndiro kana simbi tambo, uye isimbi yemutsetse ine mativi maviri perpendicular kune rimwe nerimwe.Ukobvu hwayo hwemadziro haugone kungoitwa mutete zvakanyanya, asi zvakare kurerutsa zvakanyanya maitiro ekugadzira uye kugadzirisa kugadzirwa kwakanaka.
1) Giredhi: Q195, Q235, Q345, etc. Maererano nezvinodiwa nevatengi.
2) Rudzi: kuenzana, kusaenzana
3) Kurapa kwepamusoro: galvanized kana sekukumbira kwemutengi
5) Kukura: ① kuenzana: 20 * 20-200 * 200mm ②kuenzana: 50 * 32-200 * 125mm
6) Kugadzirisa sevhisi: kuroverwa, kupendwa, kuchekwa, nezvimwe.
7) Packing: yakajairika gungwa-yakakodzera kurongedza
8) Sevhisi: cheka, weld, pendi, punch
Cold yakaumbwa simbi angle bar Ukobvu hwayo hwemadziro haugone kungoitwa mutete chete, asi zvakare kurerutsa maitiro ekugadzira uye kugadzirisa kugadzirwa kwakanaka.Cold yakaumbwa simbi angle bar is carbon structural simbi yekuvaka, inova chikamu simbi ine chikamu chakareruka, uye inonyanya kushandiswa kune simbi zvikamu uye furemu yezvivakwa zvefekitori.Kugona kwakanaka weld, kuita kwepurasitiki deformation uye mamwe masimba emagetsi anodiwa mukushandiswa.
Cold yakaumbwa simbi angle bar iri panzvimbo yakatarwa, iyo yemukati R angle yakakura kupfuura yekunze R angle, nepo inopisa yakakungurutswa simbi angle bar yakatarisana.Kunyangwe kana dimension control iri yakasimba, iyo yekunze R angle haina hukama neiyo yemukati R angle, uye ukobvu hwakafanana nehwesimbi yechiteshi.
Cold yakaumbwa simbi angle inogona kuumbwa nenhengo dzakasiyana dzakasimbiswa zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana zvezvimiro, uye zvakare inogona kushandiswa sezvibatanidza pakati penhengo.Cold yakaumbwa simbi angle bar inoshandiswa zvakanyanya muzvakasiyana zvivakwa zvekuvaka uye zvivakwa zveinjiniya, senge matanda, mabhiriji, shongwe dzekutapurirana, kusimudza nekutakura michina, ngarava, mavira indasitiri, shongwe dzekuita, masherufu emidziyo uye masherufu ekuchengetera.